warkii.com » Madaxweyne Farmaajo oo Fariin Qiiro leh udiray Madaxweyne Erdogan iyo Shacabka Turkey
Madaxweyne Farmaajo oo Fariin Qiiro leh udiray Madaxweyne Erdogan iyo Shacabka Turkey
Madaxweynaha Somalia Mudane Mohamed Abdullahi Farmaajo ayaa ku biiray madaxda aduunka ee fariimaha udiray hogaamiyaha Turkey Erdogan oo u dabaal dagaya sanad guuradii afaraad ee markii la fashiliyay Afgambigii 15-kii July 2016-kii.
Fariin uu Bartiisa twitter-ka soo dhigay, Madaxweyne Maxamed C / llaahi Farmaajo ayuu ku amaanay is-aaminaadda iyo go’aankii adkaa ee ay muwaadiniinta Turkey ku difaacdeen dalkooda.
Madaxweyne Farmaajo oo hadlayay ayaa yiri “Fariintedya waxaa ay ku socotaa Dadka Jamhuuriyadda aan Walaalaha nahay ee Turkiga iyo Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, “anigoo ku hadlaya magaca qarankeena iyo naftayda, waxaan idinkula biireynaa ducadda iyo xuska isxilqaankii shuhadadii iyo go’aanka muwaadiniinta ay ku difaacdeen dalkooda, ducadeena waa idinla jirtaa”.
Turkiga ayaa July 15-keediiay u tahay Maalinta Dimuqraadiyadda iyo Midnimada Qaranka, munaasabadaas ayaa laga xusaa guud ahaan dalkaas waxaana loo duceeyaa dadkii nafta u huray iney dalkaas ka bad-baadiyaan Afgambiga.
Dalal ay ugu horeeyaan kuwa carabta ayaa la aamisan yahay iney ku lug lahaayeen afgambigaas dhicisobay oo sababay dhimashadda dad ka badan 251 ruux iyo dhaawaca 2,200.
Dalka Somalia ayaa ka mid ahaa dalalkii sida weyn u garab istaagay madaxweyne Erdogan xiligii afgambiga kadib, Xukuumadda Muqdisho ayaa albaabada isugu dhufatay xarumo uu lahaa wadaadka Fettulah oo lagu eedeeyay inuu sameeyay afgambigaas dhicisoobay.
Dhanka kale, Xaflad lagu xusaayay sanad guuradii afaraad ee kasoo wareegtay markii af ganbi la isku dayay in dowladda Turkiga lagu sameeyo uu dhicisoobay ayaa lagu qabtay safaarada Tukiga ee magaalada muqdisho.
Munaasabada oo ay safaaradu soo qaban qaabisay waxaa ka qeyb galay Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka, wasiiro iyo masuuliyiinta safaaradda Turkiga ee Magaalada Muqdisho.
Ra iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in af ganbigii ka dhacay Turkiga ay si weyn ugu fal celisay dowladda Somalia ,isagoo sheegay in labada dalka ay yihiin Walaalo dhab ah.
Dhankiisa, Safiirka Turkey Mehmet Yilmaz ayaa ka war bixiyay sida ay wax u dheceen habeenkii 15 kii luulyo 2016 ee uu fashilmay af ganbigii la isku dayay, waxaa uu sidoo kale si weyn ugu amaanay Somalia iney garab sisay Turkey.